Tonga ny Apple Music, serivisy mivantana mozika an'ny Apple | Avy amin'ny mac aho
Tonga ny Apple Music, serivisy fandefasana mozika an'i Apple
Rehefa nahavita ny Keynote izahay dia tonga teny an-tsehatra i Tim Cook ary nanonona ny tsy nampoizina, zavatra iray hafa… izay tena tian'ny mpanorina ny Apple Steve Jobs. Amin'ity tranga ity dia nanambara androany i Apple fa manolo-tena amin'ny tontolon'ny mozika, ny serivisy fandefasana mozika izay nantsoiny hoe Apple Music.
Ny fampisehoana an'ity serivisy vaovao an'ny orinasa paoma manaikitra ity no niandraikitra Jimmy Lovin Ary raha vao nanomboka izy dia nanome toky fa ity serivisy ity dia ho serivisy mozika azo antoka. Be loatra ka ho hita na dia ho an'ny Android sy Windows aza.
Hampidirina Apple Music ao anatin'ny fampiharana Music. Izy io dia momba ny fanatambarana serivisy marobe eo ambanin'ny rindranasa tokana, hahatonga ny fampiasana azy ireo haingana sy ho mora kokoa. Iray amin'ireo zava-baovao atolotry ity serivisy fandefasana mozika ity ny Radio manerantany 24/7, izany hoe, mitondra a radio amin'ny 24/7, raha fintinina, a ny filaharan-kira amin'ny sokajy. Hitantana izany ny Beat One, a radio manerantany noforonin'ireo mpanakanto avy any New York, Los Angeles ary London izay hampiditra lohahevitra mivantana ao anatin'ny "mozika fantsona"
Fanambarana iray hafa natao androany fa momba ny sehatra tsara indrindra misy ankehitriny hahafahana mampifandray ireo mpankafy amin'ny mpanakanto. Rehefa manomboka miasa ny Apple Music dia ho afaka hikaroka ao anatin'ny rindrambaiko mozika tsy ny mozikantsika ihany isika fa izay làlana azo jerena ao amin'ny katalaogin'i iTunes hatreto.
Apple Music hianaranao amin'ny tsirinay ary arakaraka izay efa henontsika tamin'ny fivoriana teo aloha, dia hanome antsika a ny filaharan-kira atao hoe Ho anao feno hira.
Raha fintinina, serivisy vaovao izay ho azo avy amin'ny 30 Jona ho avy izao. ny vidin'ny hiditra amin'ity serivisy vaovao ity dia 9.99 $ isam-bolana ary $ 14.99 amin'ny drafitry ny fianakaviana raha manana singa enina mihoatra ny enina ao amin'ny fianakaviana maniry an'ity serivisy ity izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Music » Tonga ny Apple Music, serivisy fandefasana mozika an'i Apple
Sintomy ny sary sokitra OS X El Capitan sy iOS 9
Lisitra ofisialin'ny Mac izay manohana ny OS X 10.11 El Capitan vaovao